Waan Ku Faraxsanahay In Ay Ciyaartoyda Naga Soo Horjeeda Ku Orinayaan-Gareth Southgate Oo Ka Hadlay Orintii Jamaahirta Engalnd Ee Van Dijk. - Gool24.Net
Waan Ku Faraxsanahay In Ay Ciyaartoyda Naga Soo Horjeeda Ku Orinayaan-Gareth Southgate Oo Ka Hadlay Orintii Jamaahirta Engalnd Ee Van Dijk.
Warbaahinta England ayaa ku qaybsantay markii ay taageerayaasha xulkooda Three Lions ay si xoogan ugu oriyeen difaaca xulka qaranka Netherlands iyo kooxda Liverpool ee Virgil Van Dijk.
Dad magac wayn ku leh England ayaa bahdilaad iyo ceeb ay jamaahiirta Engalnd sameeyeen ku tilmaamay in ay Van Dijk si gaar ah u bartilmaameedsadeen intii lagu jiray kulankii afar dhamaadka UEFA Nations League ee Holland soo reebtay England.
Van Dijk oo intii uu England joogay samafal dhinaca carruurta kansarku hayo ah sameeyay isla markaana ku soo guulaystay abaal marinta xidigii sanadka ee England ugu fiicanaa ayaa kubbad kasta oo uu taabto waxa uu kulankii England iyo Holland la kulmay orin badan.
SIDOO KALE AKHRISO: Xiddiga Arsenal Aubameyang Oo Digniin U Diray Liverpool Iyo Kooxaha Kale Ee U Tartamaya Premier League Xilli Ciyaareedkan
Laakiin tababaraha xulka qaranka England ee Gareth Southgate ayaa ka hor kulan kaalinta saddexaad loogu soo baxayo ee ay Switzerland la ciyaari doonaan waxa uu ku kaftamay in uu hadda ku faraxsan yahay in taageerayaasha England ay kooxaha kale ku orinayaan.
Gareth Southgate ayaa ku dooday in halkii ay taageerayaasha xulkiisu ay markii hore kaga orinayeen ciyaartoyda xulkiisa England in ay hadda isaga farxad u tahay haddii ay ciyaartoyda kooxaha kale ku orinayaan.
Gareth Southgate oo orintii jamaahiirta England ee Van Dijk ka hadlaya ayaa yidhi: “Waan ka faraxsanahay hadda in ay ku orinayaan ciyaartooyda naga soo horjeeda markii ay ciyaartoydayada ku orinayeen ee markii aanu bilaabanay”.
“Horumar ayaanu samaynaynaa, dariiqyada Malta ayaanu ku kaxaynaynaa haddii uu Virgil in ku filan uu cadaalad u qaadan karo!”.
Joe Gomez oo xulka England ka tirsan balse ay Van Dijk isku kooxda Liverpool yihiin ayaa isna yidhi: “Anigu ma garanayo halka ay (orintu) ka timid, anigu maan arag isaga oo wax qaldan samaynaya. Anaga faa’iido badan ka koox ahaan noomay samayn”.
Laakiin markii uu xulka qaranka Netherlands guusha soo laabashada ah ka gaadhay England oo gool kaga hor martay waxa uu Van Dijk noqday xidiga qosolka ku danbeeyay ee xulkiisa la soo gaadhay finalka UEFA Nations League.